U wac Baarayaasha Badbaadada Badda Afrika - AfricArXiv
Published by Sam Dupont on 6th April 2021 6th April 2021
Si loo dhiso awoodda hay'adaha Afrikaanka ee kormeerka iyo cilmi baarista ku saabsan astaamaynta badweynta, waxaan halkaan kula wadaageynaa baaq ku saabsan ka-qaybgalka ay Shabakadda OA-Afrika waxay lahadashay baarayaasha badda Afrika.
Badbaadinta Badweynta Badweynta Afrika (OA-Africa) waa shabakad isku xirta Afrika oo si gaar ah loogu shiray isku-dubbaridka iyo kor u qaadista biyo-galinta badda (OA) wacyigelinta iyo cilmi baarista Afrika. Hawlaha cilmi baarista ee ku saabsan astaamaynta badweynta iyo walbahaarka la xiriira ee qaaradda Afrika ayaa si xowli leh u soo koraya iyadoo laga jawaabayo baahi muuqata oo loo qabo ficil si loo yareeyo oo wax looga qabto saameynta ay leedahay isbeddelada cimilada iyo isbeddelka nidaamka oo dhan. OA-Afrika waxay ka kooban tahay saynisyahano daneynaya inay cilmi baaris ku sameeyaan kormeerka iyo u kuurgalida astaamaha badweynta Afrika waxayna qayb ka yihiin kuwa ballaaran Shabakada U Kuurgalida Acidification Global Ocean
OA-Afrika waxay higsaneysaa inay:
1. Hubi Afrika waa mid adkeysi leh isla markaana aqoon u leh halista iyo istiraatiijiyadaha yaraynta / la qabsiga ee la heli karo si loola dagaallamo astaamaynta badda.
2. In la sameeyo shabakad saynisyahano ah oo wada shaqeynaya si ay u siiyaan (1) macluumaad daneeyayaasha iyo siyaasad dejiyeyaasha, (2) waxay bixiyaan hagitaan iyo tilmaam (3) isku dubarididda howlaha la xiriira cilmi baarista iyo kormeerka OA (4) waxay tilmaamayaan taageero ballaadhan oo loogu talagalay kordhinta cilmi baarista iyo kormeerka OA (5) kor u qaadida horumarka sayniska.
3. Fududeynta iskaashiga u dhexeeya saynisyahannada, daneeyayaasha, iyo siyaasad dejiyeyaasha si loo dhiso fahamka bulshada, bayoolojiga, iyo saamaynta jireed iyo saameynta aashitada badda.
Source source: oa-africa.net/
7-dii sano ee la soo dhaafay, waxaan diyaarinay barnaamij bartilmaameed ah oo lagu kordhinayo awooda lagu sameeyo kormeerka iyo baaritaanka aashitada badweynta ee wadamada soo koraya. Waxaan socodsiinay qiyaastii 20 tababar, waxaan gaarnay in kabadan 400 oo saynisyahano ah waxaanan qalab siiney hay’ado badan
Qiimeynta awooda Aysiidka Badweynta
Khubarada ku takhasustay astaamaynta aashitada badda (Ocean acidification) waxay soo diyaariyeen foom su'aalo ah oo lagu ogaanayo baahiyaha iyo qaabeynta dadaallada mustaqbalka lagu dhisayo awoodda (qalabka, tababarka) Macluumaadkani wuxuu faa'iido u yeelan doonaa bulshada cilmi baarista Afrika waxayna hagi doontaa ficilada mustaqbalka. Xog ururin aan la aqoon ayaa la abuuri doonaa oo lala wadaagi doonaa bulshada. Soo koobitaan ayaa lagu dhex dari doonaa warqad cad oo OA-Afrika ah oo lagu bartilmaameedsanayo siyaasad dejiyeyaasha si loo soo jiito ilaha cilmi baarista aashitada badda ee Afrika.
Si aad uga qaybgasho, waa inaad xubin ka noqotaa machad Afrikaan ah oo ka shaqeeya cilmiga badda. Uma baahnid inaad hadda ka shaqeyneyso mashruuc biyo-gelinta badda. Qiimeyntani waa in la siiyaa taageero la beegsanayo hay'adaha lana wanaajiyo fursadaha ay ku bilaabi karaan kormeer iyo cilmi baaris ku saabsan astaamaynta badweynta mustaqbalka dhow.
Fadlan buuxi su'aalaha soo socda; waa inay qaadataa oo keliya 15-20 daqiiqo:
Si aad noogu oggolaato inaan qiimeyno awoodda cilmi baarista astaamaha badweynta ee qaaradda oo dhan, fadlan la wadaag su'aalaha saaxiibbadaa.
Haddii aad horeyba uga jawaabtay nuqul su'aalahan ah ee hore, fadlan mar kale ka jawaab si aad uga warbixiso horumarka muddada ka dib.
Awood dhisida barta xudunta u ah Xarunta Isuduwaha Caalamiga ah ee Acidification (OA-ICC)
Bare Sare iyo Associate Professor, Jaamacadda Göteborg, Sweden
Categories:	Capacity Buildingiskaashi
Tags: isbedelka cimiladaCilmi-baarista BaddaBiyaha Oomida-saxaafadeed
Bishii Oktoobar 2021, AfricArXiv, Xariirka Helitaanka Furan ee Afrika, ayaa ku dhawaaqay iskaashi ay la leeyihiin Xarunta Tababarka ee Isgaarsiinta TCC Africa si loo dhiso loona maareeyo bulsho aqoonyahanno caalami ah oo kobcin doonta muuqaalka Afrika Akhri wax dheeraad ah…